सुन काण्डको केहि दिनमै थप रहस्य बाहिरिन्छ, अब सबै सिन्डिकेट ध्वस्त हुन्छ : गृहमन्त्री बादल  Hamrosandesh.com
सुन काण्डको केहि दिनमै थप रहस्य बाहिरिन्छ, अब सबै सिन्डिकेट ध्वस्त हुन्छ : गृहमन्त्री बादल
यातायात व्यवसायीको सिन्डिकेटको एकाधिकार तोड्न सरकार सफलोन्मुख छ। यातायातका साधन नचलाएर सरकारलाई घुँडा टेकाउने सिन्डिकेटपक्षधर यातायात व्यवसायीको उद्देश्य सफल हुने छाँटकाँट देखिएको छैन। सरकारले सिन्डिकेटपक्षधर व्यवसायीको समितिलाई अवैध घोषित गरेको छ भने यातायात जस्तो अत्यावश्यक सेवामा अवरोध ल्याउने व्यवसायीका सवारी साधनका रुट परमिट खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । शनिबार नै यातायात व्यवसायीले हड्ताल स्थगित गर्दै यातायात सेवा सुचारु गर्ने बताएका छन् । सर्वसाधारण जनताको तहबाट प्रशंशा र समर्थन पाएको सरकारको यो कदममा सबैभन्दा देखिने अनुहार बनेका छन् गृहमन्त्री रामबहादुर थापा । सिन्डिकेट, गृह मन्त्रालयका आगामी योजना, एमाले र माओवादी केन्द्रको एकतालगायतका विषयमा गृहमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेतासमेत रहेका गृहमन्त्री थापासँग अाजको अन्नपूर्ण पोस्टका लागि रामकृष्ण अधिकारीले गरेको कुराकानी ।
यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेटविरुद्ध सरकार कडा रूपमा प्रस्तुत भयो । यातायात व्यवसायीले पनि आफ्नो कार्यक्रम सफल भएको भनेका छन्, तर उनीहरू आफ्नो कार्यक्रमबाट भने पछि हटेको देखिन्छ, आखिर यसमा जित–हार कसको भएको हो ?
हामीले पहिल्यैदेखि भन्दै आएका छौं, सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने विषयमा सरकारलाई कसैका पनि कुनै सर्त मान्य हुने छैन, मान्दैनौ पनि। सिन्डिकेटलाई कुनै न कुनै तरिकाले कायम राख्न खोज्ने व्यवसायीका मागमा हामी झुक्दैनौं। त्यस्तो सर्तलाई मान्न पनि सकिन्न। यसमा सबै प्रष्ट भए हुन्छ। तर व्यवसायीका कुनै अन्य समस्या छन् भने सरकार त्यस्ता विषयमा वार्ताको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न तयार छ। कम्पनी ऐनका सन्र्दभमा पाँचवटा गाडी भएकालाई मात्र कम्पनीअन्र्तगत दर्ता गर्न पाउने भन्ने कुरालाई हामी वार्ता तथा संवादद्वारा समाधान गर्न तयार छौं। यसमा सरकार खुला पनि छ। यस बारेमा कुराकानी चलेको पनि छ, तर अहिलेसम्म यसमा सहमति बन्न सकेको छैन। सिन्डिकेट सरकारलाई स्वीकार्य छैन, अन्य व्यवसायीका समस्या समाधानमा सरकार वार्ताका लागि सधैं खुला छ।
सुन तस्करीको छानबिनमा प्रहरी अधिकारीहरू नै संलग्न देखिएकाले हाम्रो सुरक्षा संयन्त्रप्रति एउटा प्रश्न उब्जाएको छ, यो यसको नकारात्मक पक्ष हो। तर यो सँग–सँगै यसको छानबिन स्वयं प्रहरीहरू संलग्न भएर पनि भइरहेको छ। यसले पनि प्रहरी संगठन पनि आफ्नो छवि सुधार गर्न चाहन्छ भन्ने स्पष्ट छ। दुवै पक्ष छन् यसमा। मूल पक्ष भनेको हाम्रो सुरक्षा संन्यत्रभित्र ठूलै सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छानबिनबाट उद्घाटिन भएको छ। यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा नै लिएका छौं। प्रहरी संलग्नताबिना यो तस्करीको सन्जाल खडा भएको छैन। त्यसकारण हामीले यो सन्जाललाई तोड्न, तस्करीलाई अन्त्य गर्नका निम्ति प्रशासन र प्रहरी सन्जालमा पनि ठूलै मात्रामा सुधार गर्न आवश्यक छ। यो छानबिनबाट अगाडि बढेको छ।
यो प्रकरणमा राजनीतिक संरक्षण छ कि छैन ? तपाईंले सुन तस्करीका अहिले मुख्य अभियुक्त भनिएका गोर निमित्त पात्र मात्र भएको बताउनुभएको छ, यसमा अन्य पनि संलग्न छन् भनिरहनु भएको छ …?
अब छिट्टै भन्न सकिन्छ तर मिति अहिले भन्न सकिन्न । अवधिका दृष्टिकोणले छिट्टै हुन्छ भन्न सकिन्छ तर अब लामो समय लिँदैन।